Air Seychelles dia manambara fandaharam-potoana vaovao any Mauritius-Mumbai
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Air Seychelles dia manambara fandaharam-potoana vaovao any Mauritius-Mumbai
Airlines • Airport • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • Seychelles Madagascar Malgache • Fitaterana • Vaovao isan-karazany
Rivotra Seychelles dia nanambara fa hanomboka ny zotram-pirenena Mauritius sy Mumbai ny zotram-pirenena amin'ny alatsinainy 30 septambra 2019 izao.
Ny serivisy vaovao misy eo amin'i Seychelles sy i Maurice dia hisolo ny sidina talata raha ho an'ny tsena indiana kosa ny fiovan'ny fandaharam-potoana dia ahafahan'ny kaompaniam-pitaterana miasa sidina vaovao avy any Mumbai mankany Seychelles amin'ny alatsinainy.
Ny fiovana amin'ny andro niasa tany Maurice sy Mumbai dia ahafahan'ny kaompaniam-pitanterana manatsara ny fampiasana ny fiaramanidiny eo anelanelan'ny vanim-potoana fahavaratra sy ho avy. Afaka mijery ny fandaharam-potoana ny mpitsangatsangana amin'ny fitsidihana airseychelles.com.
Ny fandaharam-potoanan'ny sidina fahavaratra nohavaozina eo amin'i Seychelles sy i Maurice dia manomboka amin'ny 30 septambra hatramin'ny 26 oktobra 2019.